Kumase: (Oseikrom) yɛ Ghana kuro keseɛ a ɛso sene Ghana nkuro nyinaa gyesɛ Nkran. Nnipa a ɛwɔ Kumase bɛyɛ ɔpepepem mmuebsa (3,000,000)
Kumase abakɔsɛm firi Asantehene Nana Osei Tutu a ɔdi Kan berɛ so. Abakɔsɛm kyerɛsɛ, Nana Osei Tutu adamfo bi a wɔferɛ no Kɔmfo Anokye so na, Kumaseman yɛɛ kese. Wɔkyere sɛ Kɔmfo Anokye duaa dua mmienu wo baabi a ɛnɛ yi yɛferɛ no Kumase yi ɛne baabi a ene wɔfrɛ no Kumawu. Dua no a woduaa no Kumawu no wuui maa ɛkaa Kumase dua no. Ɛno na ɛboa maa Kumase bɛyɛɛ Asanteman kuro keseɛ ne wɔn ahenkuro.
Ɛyɛ Asantefoɔ kuro kɛseɛ a ɛhɔ na Asantehene, Otumfuoɔ Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu ahenfie wɔ. Ɛwɔ edwa keseɛ adwadifoɔ efiri atifi, anaafoɔ, apueɛ ne atoeɛ nyinaa bɛdi dwa dabiara. Asanteman afahyɛ kese paa be Akwasidae.
Asantehene: Asantehene a, ɔte Sikadwa Kɔkɔɔ so, ɛbɛyɛ mfie edu nie na obedii ne wɔfa, Otumfuoɔ Opoku Ware a ɔtɔ so mmienu adeɛ. Asanteman do won ahenfo de ɛbuo ma won nyinaa sɛdeɛ ese wo ]Ghanafoɔ ahenfo nyinaa mu.
Adesua:Adesua anaa se nwoma sua mu no, se woyi Nkran firi ho a, kuro biara nni Ghana a ewɔ sukuu pii sen Kumasi. Sukuupɔn ahodoɔ bebree na ɛwɔ ho. Emu atitire bi ne Kwame Nkrumah Suapɔn (Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST).Edin a nkurofoo taa de fre KNUST no ye Tek. Asukuufoɔ a esua adee wo KNUST beye mpem du num (15,000). Ghanaman man panin a odi kan, Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah bere so na wo sii sukuu kesee yi. Saa sukuu pɔn yi atere ama sukuu nketewaa bebree nso hyehye mu. Ebi ne School of Medical Sciences, School of Engineering ne School of Agriculture.
Sukuu akesee bi nsoso ne sukuupɔn a ede University of Education, Kumasi Campus, ɛne mmiensa bi a ennye aban dea te se KNUST. Ene Christian Service University College (CSUC), Ghana Baptist University ene Garden City University ewo Kumasi nkwantia kuro bi a yɛfrɛ no Ankaase. Kumasi Polytechnic ene tikyafoo (akyerekyerefoo) sukuu mmienu nso a yɛfrɛ wɔn Wesley College of Education ene St. Louis College of Education ewo ho. Eyinom akyi no Mpanifoo Nko Animu Sukuu bebree nso so wo ho. Ebi ne Prempeh College, Opoku Ware, Ahmadiya ene Yaa Asantewaa.
Ayaresabea: Kumase nso wo ayaresabea ahodoɔ a emu kesee no ne Ɔkɔmfo Anokye Ayaresabea. (KATH). Saa ayeresabea yi nso yɛ Kwame Nkrona Suapɔn nkrobata wɔde tete Adɔkotafoɔ Komfo Anokye Ayaresabea akyi no, ayaresabea nketewa bebree nso so wɔ Kumase mpotamu nso so ɛboa hwɛ Ayadep ahodoɔ pii.
Agodie: bɔɔl ne agoro titire a ɛwɔ Kumasi ne ne mpotamu. Agodie ɛkuo baako a agye din yie ne Kumase Asante Kotoko. Wɔn adi kan wo akansie bebree wɔ Ghana ne amanano nyinaa. Wɔn mmrane ne "Asante Kotokɔ, wokum apem a apem bɛba" Akansie bɔɔl kuo baako a wɔn taa ne Kotoko hyia mu ene Nkran Haats a wɔn wɔ Nkran.
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Kumase&oldid=32411"
Nsesae ba kratafa yi so da 1 Ɔpɛpɔn 2022, mmere 18:46.